Ukwenza uluvo lweZicwangciso zeTafile yeShishini
Useto lwetafile lokutya kweshishini lunokuvela kuseto lwetafile esisiseko ukuya kuseto lwetafile yokutyela esesikweni. Ukufumana isimilo sakho kwitafile yesidlo-sangoku ukuya kuthi ga ngoku, kuya kufuneka uyazi ukuba zeziphi izinto zokumisela iitafile ezivela apho kunye nezinto omele ukuzisebenzisa.
Kwisidlo ngasinye, ukuseta kwetafile yakho kubandakanya
Umlinganiselo ophezulu we-metformin
Izinto ezininzi (ngesiqhelo imela, ifolokhwe, kunye nesuphu yesuphu)
Iifolokhwe zingasekhohlo kwipleyiti, kwaye iimela neepuni ziya ngasekunene. Ukuba ukuseta kwakho kungaphezulu kolunye kuhlobo ngalunye lwesitya, qala ngokusebenzisa izixhobo ezibekwe kude kakhulu kwipleyiti kwaye usebenze ngaphakathi kwikhosi nganye.
Ubuncinane iglasi enye: Iiglasi zibekwe ngasekunene kwipleyiti yakho.
Isimo sakho sinokuvela
yintoni ikhowudi ndc
Itafile yesonka nebhotolo: Ngasekhohlo kwesitya esikhulu kunye nangaphezulu kweefolokhwe.
Ifolokhwe yesaladi: E-United States, le yeyona foloko ikude kakhulu ngasekhohlo kuba ikhosi yesaladi iza kuqala, kodwa ayizizo zonke iinkcubeko eziqala ngesaladi.
i-lactulose dosing yokuqunjelwa
Isitya sesaladi: Ukuba isaladi ihanjiswa kuqala, oku kuya kuba ngaphezulu kwesitya esikhulu sokutya, okanye ipleyiti yendawo.
Emva kwesidlo, ezi zinto zinokuvela (ukuba azikho etafileni ekuqaleni kwesidlo):
Ikofu okanye iti kunye neepuni zazo
Ngaba i-baclofen iyisihlaziyi semisipha
Eli nani libonisa umzekeliso weseto setafile esisiseko.
Useto olusisiseko luguqulelo olufinyeziweyo lwendawo egcweleyo okanye esesikweni (njengale ikulomfanekiso ulandelayo), onokuba nenani lezinye izinto, iipleyiti kunye neiglasi.
Ukuba awuqinisekanga ukuba yeyiphi na into oza kuyisebenzisa okanye awuyazi indlela yokutya ukutya okuthile, kungcono ukulibaziseka ngokusela isiselo sakho kwaye ubukele okwenziwa ngabanye.
Isisombululo se-albuterol sulphate inhalation
I-gel edibeneyo ijika ibe mhlophe
idosi enkulu ye-adderall
lexapro vs zoloft iziphumo ebezingalindelekanga
Ingono yokukhathazeka ayikhulelwanga
ungasela utywala kunye ne-gabapentin